‘Dhaabbatni’ maqaa ‘Fias 777’ jedhuun hojii komishinii nan hojjedha jechuun namootarraa maallaqa guuraa jiru eenyu? – ኢትዮጵያ ቼክ
Tibbana hordoftootni keenya heddu maalummaafii seera qabeessummaa dhaabbata maqaa ‘Fias’ jedhuun socho’u nu gaafachaa turaniiru.
Odeeffannoon Itoophiyaa Cheek dhiyeenya kana Tajaajila Nageenya Faayinaansii Itoophiyaa irraa argate akka agarsiisutti dhimmi ‘Fias’ Poolisii Federaalaan qoratamaa jira.
Dhaabbatni ‘Fias 777’ “dhaabbata beeksisaa hojii komishinii hojjetu” jechuun kan of ibsu yemmu ta’u “miidiyaalee hawaasaa garagaraa waliin hojjennas” jedha.
Kana malees “miseensota galmaa’anif guyyuu hojii laanna. Hojiileen kunneen baay’ee salphaadha. Cuqaasuu qofa. Yoo baay’ate daqiiqaa shan kan fudhatanidha” jedha.
“Hojiin miseensa tokkoof laatamufii maallaqni argatu sadarkaasaa irratti hundaa’un garaagarummaa qaba. Sadarkaaleen kunis VIP-0, VIP-1, VIP-2, VIP-3, VIP-4 fi VIP-5 dha” jechuunis dhaabbatichi hima.
“Akka fakkeenyaatti miseensi tokko birri 10,000 kaffaluun sadarkaan VIP-4 kennamaaf” jedha Fias 777.
Namni sadaraa VIP-4 irra jiru guyyaatti hojiilee 17 irratti cuqaasa (click godha). Hojii tokkoof birriin 18 ni kaffalamaaf. Haaluma kanaan guyyaatti birri 306 yookin immoo ji’atti birrii 9,180 akka kaffalamuuf hima.
Dhaabbatichi “Itoophiyaa keessatti hojii erga jalqabee as namoota baay’een jaalatameera. Lakkoofsi namoota galmaa’anis miiliyoona lama ta’eera” jechuun ji’a tokko dura himee ture.
Haa ta’u malee dhaabbatichi dhaabbilee kanaan dura Itoophiyaa keessatti akka hin sochoone dhorkaman akka ‘QuestNet’ fi ‘Tiens’ mala ‘pyramid scheme’ jedhamuun hojjechaa akka jiru hubanneerra.
Kunis namoota baay’ee of jalatti ijaaruun kan hojjetamu yemmuu ta’u, namootni dursanii dhaabbatichatti galmaa’an maallaqa yemmuu argatan namootni boodarra makaman heddu immoo goyyomfamanii hafu.
Dhaabbatichaaf gama Baankii Abisiiniyaa fi Baankii Daldalaa Itoophiyaatin kaffaltiin raawwatamaa akka tures ragaan Itoophiyaa Cheek argate ni mul’isa.
Maamilli ‘Fias 777’ Itoophiyaa Cheek haasofsiise, “dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti galmees ta’e waajjira hinqabu. Abbootii qabeenyaas hin beeknu” jedheera.
Yeroo keessa dhaabbaticharratti komiiwwan ka’uu kan himu maamilichi, “gaafii yemmuu gaafannu ‘Fias keessaa ni ari’amtu’ nun jedhu. Iftoomina hinqabu” jechuunis hima.
Dhaabbatni ‘Fias’ Itoophiyaa keessatti galmaa’era jedhus kun sirrii akka hintaane Waajjira Galmee Daldalaa Ministeera Daldalaatii mirkaneeffanneerra.
Itoophiyaa Cheek nama ‘bakka bu’aa dhaabbatichaati’ ofiin jedheen waa’ee hojii dhaabbatichaa kan gaafate yemmuu ta’u, “namootni gama Feesbuukii, TikTok fi Yutuubiitiin qabiyyee yemmuu cuqaasan lakkoofsi daawwattootaa ni dabalaafi. Kanaafis Feesbukii irraa kaffaltii ni arganna. Isaan waliin hojjenna” jedheera.
Haa ta’u malee geessituun gara miidiyaalee hawaasaa kunneenii geessu akka hin jirre ilaaluu dandeenyerra.
Namni ‘ani bakka bu’aa dhaabbatichaati’ jedhe kun waliigaltee Feesbuukii waliin qaban akka nutti agarsiisan kan gaafanne yemmuu ta’u, “ana bira hin jiru. Harka namoota biyya alaa jiranii jira” nun jedheera.
Dabalataan marsariitiiwwan burjaajesitoota sakatta’an ‘Scam Advisor’ fi ‘Scam Detector’ jedhaman marsariitiin ‘Fias 777’ marsariitii burjaajesitootaa akka fakkaatu agarsiisu.
Namootni heddu birrii dhibbaa hanga 10,000 gama baankiitiin dhaabbatichaaf kaffalaniiru.
Akkuma olitti eerame dhimmi ‘Fias’ Poolisii Federaalaan qoratamaa jiraachuu Itoophiyaa Cheek Tajaajila Nageenya Faayinaansii Itoophiyaarraa odeeffateera.
Dhaabbata kanaan dabalataan qaamolee gochaalee burjaajii/goyyomsuu gama intarneetaan raawwatamurratti hirmaachuun shakkaman kunneen biroo irratti hordoffiin adeemsifamaa akka jirus dhageenyerra.
Itoophiyaa Cheekis hawaasni burjaajii/goyyomsuu gama intarneetaan raawatamurraa akka of eegu dhaama.